Akụkọ - Achara uhie uhie Pearl Beads na South Sea Gold Pearl Beads
Pearl ọla aka
Mmiri Mmiri Loose Pearl
Loose Peads Beads
Agba uhie uhie Pearl Beads na South Sea Gold Pearl Beads
Ọlaedo ọla edo anyị na-ekwukarị maka ya bụ Pearl nke South Sea, nke bụ ụdị pearl mmiri mmiri a mụrụ na oke osimiri dị n'akụkụ ugwu nke Australia, Philippines, Malaysia na agwaetiti Indonesian. N'ihi agba ọla edo ya, a na-akpọ ya Pearl Sea Gold, nke a na-akpọkwa Pearl South Pearl. Inamke n̄kpọ m̀m in ọsọn̄urua n̄kpọ m̀m or ọsọn̄urua n̄kpọ, ẹkeme ndikot enye edidem pearl. Ogologo oke osimiri Osimiri South nwere obere.
N'ozuzu ya nwere dayameta nke 9-16mm South Pearl Pearl, nke ọtụtụ n'ime ya dị n'etiti odo na ọcha, obere ọnụ ahịa dị mma na ọla edo bara ọgaranya.
Ya mere, ọnụ ahịa ọla edo dị oke elu. Chụ ahịa ahụ na-eme ka ọtụtụ ndị na-emepụta ihe họrọ ịhọrọ pel. Ya mere, olee otu anyị si amata ọdịiche dị n’etiti pear na okike eyịel?
Agba nke cha cha cha cha achala acha, ma agba nke pel pel abụghị agba siri ike, a na-enwekarị agba agba. Jiri nwayọ gbanye pealu ahụ, ị ​​ga - ahụ obere ọkụ na - acha uhie uhie na - agbanwe agbanwe oge niile. Agba nke a ga - ahụ pear a na - acha uhie uhie ga - akarịbeghị otu, n'agbanyeghị akụkụ ha si yie otu, ya mere, o doro anya na ha dị iche na pel ọma.
Maka pear a na-ete uhie, ihe a na-ekpe na-acha odo odo ga-edozi ebe nwere obere njupụta, mgbe ahụ, a ga-etolite ntụpọ, agbanyeghị, nkume pel nwere ụdị agba dịtụ iche na enweghị ụdị ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị zutere nkume pel dị na South Oké Osimiri ndị na-acha odo odo ma nwee ọdịdị dị mma, mana ọnụahịa dị ọnụ ala, lee anya. Ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ pel pel nke South Sea nwere agba dị mma, ọdịdị dị mma na enweghị ntụpọ dị obere, ọnụahịa ga-adị oke ọnụ.
Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa na-ekwu na ha nwere ọla edo 11-13mm na enweghị ntụpọ, na ọnụahịa dị ọnụ ala karịa ihe ị maara na mbụ, zere ya.
Ọ bụrụ na ndị Seasọ Oké Osimiri South na-erughị 8mm na dayameta, ịkwesịrị ịmụrụ anya.
Dayameta nke ọla pel bụ n'ozuzu 9-16mm, nke bụ ihe ezi uche dị na ya.
Ọ bụrụ n’inweghi n’aka ma peel ndị ị zụtara na-acha, biko were ya gaa ụlọ ọrụ nnwale nwere ikike ịnwale.
Post oge: Jul-03-2021
Freshwater Pearl Bridesmaid Onyinye, Ezigbo Omenala Cultured Freshwater Pearl, Pearl Stud ọla ntị, White Gray Freshwater Ọla Pel, Aaa Mmiri Ugo, Ọla Ntị Agbamakwụkwọ,
lastest ozi ọma
White pel na acha nkume pel
Agba uhie uhie Pearl na Oke Osimiri South ...
Kedu ihe kpatara ọla ọla gị ji anọkarị ...